कसरी वाथरूम क्षेत्र अधिक व्यावहारिक स्थापना गर्ने? यो चार पक्षबाट सुरू गर्नुहोस्, त्यो राम्रो देखिने र राम्रो प्रयोग सुनिश्चित गर्न!
घर / ब्लग / कसरी वाथरूम क्षेत्र अधिक व्यावहारिक स्थापना गर्ने? यो चार पक्षबाट सुरू गर्नुहोस्, त्यो राम्रो देखिने र राम्रो प्रयोग सुनिश्चित गर्न!
2021 / 04 / 10 वर्गीकरणब्लग 644 0
बाथरूमको डिजाइन भुइँ र भित्ताका टाईलहरू बाहेक, बेसिनको छनौट, नुहाउने क्याबिनेट महत्त्वपूर्ण कुराको साथ दर्पण गर्ने योजना! राम्रोसँग डिजाइन गरिएको, दुबै सुन्दर र भण्डारण प्रकार्य। खराब योजनाले मोल्डमा जान सक्छ, मर्मत गर्न सजिलो छैन र भण्डारण ठाउँ अपर्याप्त छ। सिंक, बाथ क्याबिनेट शैली, ऐना डिजाइन र प्रकाश सजावटी विश्लेषणको चयनबाट निम्न ठूला र साना परिवारहरू प्रदान गर्न major प्रमुख समस्याहरू र काउन्टरमेजरहरू सिinkक सजावट आलसी प्याकेजमा लागू हुन्छन्!
काउंटरटप छनौट गर्न वाशबेसिन, निर्मित प्रकार अन्तर्गत
वा स्तम्भ बेसिन शैली?
१, भारी मोडलिंग, कडा मेहनतका मानिसहरू उपयुक्त: काउन्टरटप
विशेषताहरु: १०० पोइन्टको आकारको डिजाइन, नुहाउने क्याबिनेटको स्थापना मुनिको भण्डारण ठाउँ, सुविधाजनक बहु-तह परिवर्तनहरू।
नोट: काउन्टरटपको चौडाई कमको लागि उपयुक्त छैन, र faucets को स्थापना को उपयोग को उचाई को व्यक्तिगत बानी अनुसार समायोजित हुनु पर्छ, हात धुने कार्ड र अन्य समस्याहरु बाट जोगिन। थप रूपमा, किनभने सफा डेड सिन्ड उत्पादन गर्न सजिलो छ, स्प्लासहरू कायम राख्न सजिलो हुन्छ, सफापनको लगनशील मर्मत सम्भार गर्न सजिलो छैन।
2Uch धेरै अव्यवस्था, आलस्य व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त: सम्मिलित प्रकार अन्तर्गत
विशेषताहरु: काटिएको फ्ल्याश काउन्टरटप डिजाइनले काउन्टरटपलाई अधिक प्रशस्त देखिन्छ, यस क्षेत्रमा भण्डार गर्न सकिन्छ ठुलो देखिन्छ, र मर्मत सहयोगको लागि कम ठाउँमा सफा ठाउँमा सफा गर्न सकिन्छ।
नोट: काउन्टरटपको साथ सीमको किनारा मैला लुकाउन सजिलो छ, र स्थापना र निर्माण अपेक्षाकृत जटिल छ।
,, कम सामान, सानो घरको लागि उपयुक्त: स्तम्भ बेसिन / भित्ता ह्या। बेसिन
विशेषताहरु: सानो ठाउँ ओगट्नुहोस् धेरै ठाउँ बचाउन, सानो पिंगहरूको लागि आदर्श, आधा बाथरूम डिजाइन, र स्थापना गर्न सजिलो र सफा गर्नुहोस्।
नोट: कम बाथरूम क्याबिनेट भण्डारण ठाउँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, अन्य भित्तामा चढिएको भण्डारण अलफहरू मार्फत हुनु आवश्यक पर्दछ, जस्तै कि बाथरूम आपूर्तिको प्लेसमेन्ट वृद्धि गर्न।
नुहाउने क्याबिनेटमा बाथरूम भण्डारण फोकस!
खुला वा लुकाइएको छ, कुन छनौट गर्न?
१, कम सामानहरू, विविध डिजाइनका लागि उपयुक्त: खुला तखता
विशेषताहरु: बहुमा शेल्फ शैली परिवर्तन, बास्केट लचिलो वर्गीकरण र पहुँच गर्न सजिलो संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नोट: यदि ठाउँ भारी ओसिलो छ, भण्डारण आईटमहरू कायम गर्न गाह्रो छ, त्यहाँ एक भिजेको र सुख्खा ठाउँ राम्रो उपयुक्त छ।
2Suitable अधिक चीजहरू, उपयुक्तको संक्षिप्त र स्वच्छ भावना जस्ता: स्वतन्त्र क्याबिनेट भण्डारण
विशेषताहरु: क्याबिनेट ढोका, दराज बन्द, सबै वस्तुहरू सफा र सफा, र पर्याप्त भण्डारण क्षमता।
नोट: क्याबिनेट र ढोकाको पाना छनौटमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, यो जलरोधक सामग्री चयन गर्न सिफारिश गरिन्छ, चिस्यान र मोल्डबाट बच्न। अधिकांश स्नान क्याबिनेटहरू सामान्यतया वाटरप्रूफ फाइबरबोर्ड वा फोम बोर्ड संरचना प्रयोग गर्दछन्; क्याबिनेट ढोका सामग्री फोम बोर्ड र मेनाई बोर्ड बल्कको रूपमा छ।
अनिवार्य संग दर्पण,
दर्पण चयन, के सिफारिस गरिएको छ?
१, फ्रेम गरिएको वा फ्रेम रहित
सामान्यतया, अधिकांश व्यक्ति आकारका आधारमा छनौट गर्दछन्, यदि फ्रेममेन्ट शैलीको तुलनामा फ्रेमलेसको मर्मत, सफाई र मर्मतको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अधिक सुविधाजनक छ। यदि त्यहाँ फ्रेम सामग्रीको कुनै नमी-प्रुफ गुणहरू छैनन्, बिग्रनको लागि समय अवधि प्रयोग गर्न सजिलो। सौन्दर्य दृष्टिकोणबाट, त्यहाँ फ्रेममा अधिक विकल्प र परिवर्तनहरू छन्, अधिक मोडलि advant फाइदा।
2、 दर्पण मर्मत
सामान्य दर्पणहरूमा आधारभूत एन्टी-फग र एन्टी-रस्ट समारोह हुन्छ, यदि बाथरूमको भाँडो कमजोर छ वा स्थान विशेष गरी आर्द्र छ भने, यसलाई सुदृढ पार्नको लागि एन्टी-फोग फिल्म वा एन्टी-फोग एजेन्ट खरीद्नु पर्छ।
3、 ऐना आकार
मिरर गर्न गोलाकार, बल्क रूपमा वर्ग, सि the्क सतहको आकारमा आधारित हुन सक्छ। दर्पण चयन सि size्क भन्दा ठूलो आकार छनौट गर्न सिफारिस गरिएको छैन, दृश्य अनुपात अधिक असंतुलित छ।
भित्ते बत्तीहरू, झूमरले बाथरूम शैली सजावट,
के स्थापनामा ध्यान दिन?
बाथरूम स्पेसको आधारभूत प्रकाश निर्धारण पछि, धेरै व्यक्तिले सिinkक क्षेत्रमा झूण्डो स्थापना गर्नेछन्, एक्सेन्ट लाइटिंगको लागि भित्तामा चिन्ताहरू, स्पेस शैली थपेर।
भित्ता र छतमा प्रकाश फिक्स गर्न स्थापना ड्रिलिंग प्वाल पछि स्थापनाले उचाई र स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
प्रकाश, प्रकाश र छाया मोडेलिंगको शैलीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ, निरीक्षण दुलाहा र सम्पूर्ण कोठा प्रकाश वातावरणको दृश्यलाई प्रभावित गर्नबाट रोक्न दर्पण स्थानलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
अघिल्लो :: बाथरूम पुन: निर्माण, G स्ट्रोक एक भव्य रूपान्तरण प्राप्त गर्न अर्को: शौचालयमा एउटा शेल्फ स्थापना गर्नुहोस्, बाथरूम तत्काल अधिक Squ स्क्वायर मीटर लाइभ!
2021 / 06 / 08 496
2021 / 05 / 28 628
2021 / 04 / 22 1017
2021 / 04 / 22 1147
2021 / 04 / 21 763
2021 / 04 / 12 913